Bad-maaxayaal tababar Muqdisho loogu soo gabagabeeyey – Radio Muqdisho
Bad-maaxayaal tababar Muqdisho loogu soo gabagabeeyey
Munaasbadaan tababarka loogu soo xirayay ilaa iyo 30 Bad-maax oo muddo lix maalin siminaar ugu socday Muqdisho, isla markaana ay iska kaashadeen Wasaaradda Kalluumeysiga, Hay’dda Cunnada iyo Beeraha ee FAO iyo Jaamacadda Daarul Xikma ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho, kaasi oo ay ka qeyb galeen Mas’uuliyiin ka kala socday Wasaaradaha Kaluumeysiga iyo Dekahada, Madaxda Jaamacadda Daarul Xikma iyo kuwa hay’adda FAO.
Tababarkan ayaa naaquudayaashu waxa ay ku baranayeen sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen xilliga ay ku guda jiraan howlaha jillaabashada iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen ilaalinta xeebaha Jamhuuriyadda Somalia, sidoo kale in ay ka qeyb-qaataan badbaadinta dadka ay qatarta ku qabsato badda gudaheeda.
Guddoomiyaha Jaamacadda Daarul Xikma Yuusuf Axmed Hiraabe ayaa sheegay in tababarkan uu ku soo dhammaaday sidii loogu talagalay, wax bandanna laga wada faa’iiday, isagoo dadki qaatay tababarka ku boorriyay inay ugu adeegaan bulshadooda.
Xuseen Cali Axmed Wakiilka Hay’adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in Wasaaraddu ay ka caawin doonaan sidii tababarradan loo sii wadi lahaa, si wax soo saarka Kalluumeysiga loo ballaariyo.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Axmed Maxamed Imaan ayaa sheegay inay wadaan qorsheyaal lagu horumarinayo kalluumeysiga, ayna dalka ka hirgelin doonaan goobo ay kalluumeysato ku keydsadaan kheyraadka ay badda kala soo baxaan.
Ugu dambeyntii dhalinyardii tababarka loo qabtay e ka tirsanaa Naaqudiyaasha ayaa lagu guddonsiiyya shahaadooyin.
Barlamaanka Somalia oo ka doodaya waqtiga golaha wasiirrada la ansixinayo
Barlamaanka Somalia oo u codeeyey in sabtiga golaha wasiirrada la horkeeno